​भ्रष्टचारको थुप्रोमा वीपी प्रतिष्ठान
प्रधानमन्त्रीलाई २ करोड नजराना
Tuesday, 10 Jan, 2017 12:46 PM
धरान, २६ पुस । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितताको विरुद्धमा डा गोविन्द केसीले राखेका १० बुँदे मागमध्ये वीपी कोइराला स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेका आर्थिक तथा शैक्षिक अनियमितताको छानबिन गरी कारबाही अघि बढाओस् भन्ने थियो । सरकारले उनको माग पूरा गर्न तीन सदस्याीय छानबिन समिति बनाएर ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । तर प्रतिष्ठानभित्र भएका शैक्षिक तथा आर्थिक भ्रष्टचारका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्व क्षेत्रीय कार्यालयले सम्पूर्ण अनुसन्धान गरी प्रमाण र पदाधिकारीहरुको बयान समेत लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा फेरि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय टोली बनाउनु भनेको सरकारले केसीलाई थाङ्नामा सुताउन खोज्नुमात्र भएको प्रतिष्ठानका डाक्टर कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले कारबाही अघि बढाउनुको सट्टा उल्टै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम्ले नजराना लिएर ‘यो उपकुलपतिको यही महिना म्याद सकिहाल्ने भएकाले यसलाई केही कारबाही नगर्नू’ भन्ने अख्तियारका आयुक्तहरुलाई निर्देश दिएको समाचार समेत सार्वजनिक भयो । ४ बर्षे कार्यकालमा भ्रष्टचार गरेर अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेका उपकुलपति डा. बलभद्र दासले आफ्ना मानिसमार्फत् पुस पहिलो साता प्रधानमन्त्रीका छोरा प्रकाशदाहाल मार्फत् सो रकमको झोला बुझाएको माओवादी केन्द्रका एक स्थानीय नेताले नै पर्दाफास गरेका छन् । यस पटकको भनसुनमा डा दासको तर्फबाट रसियन ब्यापारी उपेन्द्र महोतोले समन्वयको भूमीका निभाएको सूत्रले जानकारी दिएको छ । स्मरण रहोस्, वीपी प्रतिष्ठानमा व्यापक आर्थिक, शैक्षिक भ्रष्टाचार हुने गरेको उजुरीको आधारमा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्र्वी क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक डुलुराज बस्नेतले छापा मारी कारबाही अघि बढाएका थिए । तर सो फाइललाई प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की (बर्खास्त) ले अघि बढाउनबाट रोकिराखेका थिए । किनभने उनले पनि डा. दासबाट कुस्त नजराना लिएको कुरा पत्रपत्रिकाहरुले पर्दाफास गरेका थिए ।
प्रतिष्ठानमा डिजेल घोटलाको पर्दाफास
४ बर्षे कार्यकालमा डा दासले गरेका भ्रष्टचारको फाइल अख्तियारले अघि नबढाउँदा उत्साहित भएका उपकुलपति दास र अरु पदाधिकारीले अवकाश अघि झन् ठूलठूला घोटाला गरेका रहस्यहरु बाहिर आउन थालेका छन् । त्यहाँ भएका भ्रष्टचारमध्ये हालै पर्दाफास भएको डिजेल घोटलामा भीसी लगायत रजिष्टारका भाइ गोपाल श्रेष्ठको सलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ । प्रतिष्ठानका डेपुटी रजिष्टार अमित श्रीवास्तवले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिष्ठानले गत आर्थिक बर्षमा जेनेरेटर चलाएबापत रु. २ करोडको विल भुतmान गरेको थियो । तर विद्युत प्राधिकरण धरानले दिएको जानकारी अनुसार सो आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा २८ घन्टा ५ मिनेट मात्र लाइन अवरोध भएको रेकर्ड देखाएको छ । तर प्रतिष्ठानको रेकर्डमा भने २०८४ घण्टा २ मिनेट लाइन गएको देखाइएको छ । सो आँकडा अनुसार प्राधिकरणले प्रतिष्ठानमा लोडसेडिङ गरे भन्दा झण्डै २०५५ घण्टा बढी जेनेरेटर चलाएको देखाई भ्रष्टाचार गरेको छ । प्रतिष्ठानमा विद्युत आपूर्ति हँुदाहुँदै पनि जेनेरेटर किन चलाउनुप¥यो ? एक कर्मचारीका अनुसार धरान बरगाछीस्थित अरुण पेट्रोल पम्पबाट मिलेमतोमा तेल ल्याएर आर्थिक घोटला गर्ने गरिएको छ । रजिष्टारका भाइ गोपाल श्रेष्ठको नाममा रहेको सो पेट्रोल पम्पमा निवर्तमान उपकुलपति दासको पनि शेयर लगानी रहेको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार सो पम्पले रकम भुक्तान गरेको भन्दा कम पेट्रोल ट्यांकीमा खन्याएर जाने गरेको छ । आधा ट्यांकी पेट्रोल ल्याएर फूल ट्यांकी पेट्रोलको भुक्तान गर्ने गरेको त्यहाँका कर्मचारीहरु वताउँछन् । विद्युत प्रााधिकरणले गत आर्थिक वर्षको असोज, कार्तिक, मंसीर, पौष र फागुन महिनामा एक सेकेण्ड पनि लोडसेडिङ नभएको तथ्याड उपलव्ध गराएको छ । तर प्रतिष्ठानको स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार लोडसेडिड नै नभएको समयमा ४९८ घण्टा ३० मिनेट जेनेरेटर चलाएको देखाई रकम भुक्तानी दिइएको छ । कार्तिक महिनामा मात्र ७४ घण्टा २ मिनेट जेनेरेटर चलाएको देखाइएको छ ।
६ हजार लिटर पेट्रोल गायव
गतबर्ष भारतले नाकावन्दी गरेर देशमा इन्धनको हाहाकार मच्चिएको बेला अरुण पेट्रोल पम्पका संचालक गोपाल श्रेष्ठले भने मौकाको फाइदा उठाई प्रतिष्ठानको नाममा ल्याइएको ६ हजार लिटर डिजेललाई सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार जनसेवक भण्डारीलाई सिधै बिक्री गरेको कुरा स्वयम् गोपाल श्रेष्ठ बताउँछन् । नाकाबन्दीको बेला २०७२ पुस १४ गते ८ हजार लिटर डिजेल र दोस्रो पटक २०७२ फागुन २५ गते ६ हजार लिटर डिजेल प्रतिष्ठानको नाममा खरिद भएको कुरा निगमका क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दिनेश यादवले जानकारी दिएका छन् । तर प्रतिष्ठानको रेकर्डमा भने एक पटक मात्र खरिद गरिएको देखिन्छ । दोस्रो पटक ल्याइएको डिजेल कता हरायो भनी स्थानीय अखवारहरुले समाचार प्रकाशित गरेपछि ठेकेदार श्रेष्ठले आफूले उपकुलपतिको तोक लगाई सिधै आयल निगमवाट ल्याएर सडक बनाउने ठेकेदारलाई बिक्री गरेकाले प्रतिष्ठानकोे रेकर्डमा नदेखिएको कुरा स्वीकार गरेका छन् । यसरी रजिष्टारका भाइको नाताले गलत फाइदा उठाई श्रेष्ठले प्रतिष्ठानको नाममा करोडांैको ठगी गरेका छन् । उनले विभिन्न नाममा चार वटा फर्म दर्ता गराएका छन् । सोही फर्मबाट टेण्डर पारेर प्रतिष्ठानभित्र हालीमुहाली गर्ने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
उपकुलपतिको भतिजाको नक्कली सर्टिफिकेट
प्रतिष्ठानको कम्प्युटर विभागका अधिकृत राकेश दास उपकुलपति वीपी दासका साख्खै भतिजा हुन् । ४ बर्षदेखि जागिर खाएका दासको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको कुरा पटकपटक अखवारमा आए पनि प्रतिष्ठानले छानबिन गर्नुको सट्टा उनलाई स्थायी नियुक्ति गराउन डा दासले यही मंसीर १३ गते उनीसँग अन्तर्वार्ता लिएका थिए । प्रतिष्ठानको नियमावली अनुसार स्थायी हुनका लागि कम्तीमा ५ बर्ष काम गरिसकेको हुनुपर्ने छ । तर संस्थाको नियमावलीविपरीत भतिजालाई स्थायी बनाएर गएका छन् । राकेश दासलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रजिष्टार वनाएर पठाउने पनि दासको चलखेल भइरहेको बुझिएको छ ।
जाने बेलामा बंगलाको व्यवस्था
आफ्नो ४ बर्षे कार्यकाल यही डिसेम्वरदेखि सकिने बेलामा उपकुलपति दासले आफनो लागि भनेर प्रतिष्ठानको अति विशिष्ट पाहुनाहरु आउँदा वस्ने भीभीआईपी बंगला कव्जा गरेर वस्नका लागि झण्डै २० लाख खर्च गरेर मर्मत सम्भारको काम गरेका छन् । जवकि उपकुलपतिबाट हटेपछि प्रोफेसरले पाउने साधारण निवासमा बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी उपकुलपति दासले आफ्नो कर्मचारी डाक्टरको भाग खोसेर भारतबाट नक्कली विधार्थी ल्याउन सघाउने सुमित साह र ठेक्कापट्टामा सधाउने सुशीलकुमार झालाई एक एक वटा बंगला र क्वाटर दिएर राखेका छन् । प्रतिष्ठानभित्रको विशिष्ट पाहुना तथा बरिष्ठ प्रोफेसरहरु बस्ने बंगला नम्वर १५५ मा विगत एक बर्षदेखि रहस्यमय ढंगवाट दुई जना बालबालिकासहित एक बिधवा महिला बस्दै आएकी छिन् । उनी सप्तरी हनुमाननगर वस्ने डा दासको साथी रामबाबु भनिने नवलकिशोर साहको कान्छा छोराकी श्रीमती हुन भनिन्छ । गत बर्ष उनको श्रीमानको दिल्लीमा मृत्यु भएपछि डा. दासले उनलाई यहाँ राख्न थालेको हुन् । नवल किशोरका जेठा छोरा सुमित साह भने भारतबाट विद्यार्थी ल्याउने धन्दा गर्दछन् । एकपटक उनले भारतीय विद्यार्थीको सिटमा आफंै बसेर प्रवेश परीक्षा दिदै गर्दा पक्राउ परेका थिए । तर अहिले तिनै शंकास्पद व्यतिm उपकुलपतिका दाहिने हात भएर बसेका छन् । यसैगरी प्रतिष्ठानको ठेक्कापट्टाामा कमिशन संकलन गर्न सघाउने सिरहाका इन्जिनियर सुशीलकुमार झालाई पनि ज्वाई सरह सुविधा दिएर अधिकृत कर्मचारी बस्ने ई टाईपको बिल्डिडमा बस्न दिएका छन् ।
डिजेल घोटालामा रजिष्टारका भाइ
वीपी प्रतिष्ठानमा धरानका दुई व्यापारी गोपाल श्रेष्ठ र चेतन अग्रवालले त्यहाँका पदाधिकारीहरु रिझाएर विगत १५ बर्षदेखि ९० प्रतिशत ठेक्कापट्टा आफ्नो कब्जामा लिने गरेका छन् । गोपाल श्रेष्ठ वर्तमान रजिष्टार कुलबहादुर श्रेष्ठका भाइ हुन् । उनले प्रतिष्ठानको सरसफाइ, स्टेशनरी, छपाई, भित्री सरसफाइ, अस्पताल सामग्री, इन्धन लगायतका काम एक्लौटी रुपले गर्न थालेको १५ बर्ष भयो । उनले प्रतिष्ठानबाटै कमाएको अकुत सम्पत्तिबाट धरान ७ को वरगाछीमा अरुण पेट्रोल पम्प किनेका छन् । प्रतिष्ठानकै कर्मचारीहरुको सल्लाह र योजना अनुसार खरिद गरेको सो पेट्रोल पम्पबाट प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने पेट्रोल डिजेलमा करोडांैको घोटाला हुने गरेको छ ।
यसैगरी धरानकै अर्का व्यापारी बिर्जु कवाडीका छोरा चेतन अग्रवालले विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर अस्पतालका सवै किसिमका महंगा सामग्रीको ठेक्का पाउने गरेका छन् । तर उनले दिएका प्रायः सवै सामानहरु एक बर्ष नवित्दै विग्रिएर थन्किने गरेको कुरा स्टोर रेकर्ड बुकबाट थाहा पाउन सकिन्छ । किनभने उनले दिएका सामानहरु अन्य डिलर्स भन्दा रकम घटाएर दिने तर कर्मचारीहरुसँंग मिलेर टेण्डरमा तोकिएको भन्दा फरक किसिमका सस्ता सामानहरु भिडाउने गरेको कुरा त्यहाँका डाक्टर कर्मचारीहरु बताउँछन् । करोडौं मूल्य भुक्तानी गरी उनीसँग खरिद गरिएका सामानहरु अहिले पनि सल्यक्रिया विभाग, दन्त चिकित्सा विभागमा नचलाई थन्किएर बसेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ ।
यसैगरी उनले अस्पतालभित्रको फार्मेसी सस्तो भाडा दरमा लिएर ७ वर्षदेखि चलाइरहेका छन् । प्रतिष्ठानको आफनै ग्याँस प्लान्ट हुँदाहुँदै पनि प्रतिष्ठानका कर्मचारीले कृत्रिम अभाव सृजना गरी अग्रवालवाट दिनमा एक ट्रक ग्याँस किनेर कमिसन भागवण्डा गर्ने गरेको थाहा हुन आएको छ ।
दिल्ली पब्लिक स्कुलमा व्यापक भ्रष्टचार
प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीय डाक्टर कर्मचारीहरुका छोराछोरी पढाउने उद्देश्यले सरकारसँग विनाइजाजत स्थापना भएको प्रतिष्ठानभित्रको दिल्ली पब्लिक स्कुल पनि डा. दासको पैसा कमाउने थलो भएको छ । प्रतिष्ठानको उपकुलपति प्रमुख संरक्षक हुने प्रावधानको फाइदा उठाउँदै डा दासले प्रतिष्ठानभित्र धमाधम विल्डिङहरु निर्माण गरे । जवकि सो विद्यालय भनेको भारतीयहरुको एक निजी संस्थाबाट सचालित छ । हालैमात्र निर्माण भएको ढेड करोडको एउटा बिल्डिड टेण्डर नगरी सुशीलकुमार झाको नाममा आफंैले ठेक्का लिएका छन् । सो विद्यालयमा दिनेश श्रेष्ठ नामका एक व्यापारीले सवै किसिमका सामानहरु दिने ठेक्का लिएका छन् । तर सो विद्यालयका लेखापाल मल्लिकले भ्याट विल नकाटी भुक्तानी गरी कर छल्ने गरेको थाहा हुन आएको छ ।
विनाटेण्डर गाडी खरीद
यही डिसेम्वरमा आफनो पदावधि सकिएर विदा लिने बेलामा उपकुलपति दासले सवै नियम कानुन मिचेर पैसा कमाउने धन्दामा लागे । जसको उदाहरण स्वरुप भीसीका २ वटा महगो गाडी हुँदाहुँदै डेढ महिनाअघि मात्र आफनो लाग् ि थप २ वटा गाडी एक करोड २० लाखमा विना टेण्डर खरिद गरेका छन् । धरानको कुवेर अटो टेडर्सबाट खरिद गरिएको भनिएको को १ च ९८९५ नम्वरको गाडी हाल उपकुलपतिले चलाइरहेका छन् भने अर्को को १ च ९८९६ नम्वरको गाडी काठमाडौं लैजाँदा बाटोमा दुर्घटना भई हाल ग्यारेजमा थन्किएको अवस्थामा रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । सो गाडी खरीदमा टेण्डर नगरी खरिद गर्दा ६ लाख कमिस लिएको आरोप दासमाथि लागेको छ ।
कुर्सी बचाउन रामदेवको शरणमा
उपकुलपति डा. बलभद्र दास र रजिष्टार कुलबहादुर श्रेष्ठ मंसीर ८ गते विहान एक्कासी नेपाल आएका रामदेव बाबालाई भेट्न प्रतिष्ठानको तेल र गाडी प्रयोग गरेर बीरगन्ज पुगेका थिए ।
आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गर्दै रामदेवलाई भेट्न किन त्यति टाढा गए भन्नेबारे प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुबीच ठूलो बहसको विषय वनेको थियो । एकथरी कर्मचारीहरु रजिष्टार र उपकुलपतिको विरुद्ध उठेको भ्रष्टचारको फाइल अख्तियारले चलाउन लागेको हुनाले बचाउको लागि बाबाको शरणमा पर्न गएको बताउँछन् । आफ्नो विरुद्ध परेको उजुरी र कारबाही रोक्न अख्तियारका पदमुक्त प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई भीसी दासले करोडौं रुपैयाँ खुवाएको घटना विवरण त राष्ट्रिय मिडियाले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तिनै लोकमान हाल निलम्वित भएर कारबाहीको मुखमा पुगेकोले चिन्तित बन्न पुगेका भीसी दासले रामदेवलाई फकाएर पुनः भिसी बन्न र कारबाहीवाट मुतm हुने आशीर्वाद लिन पुगेको बताइन्छ । उनीहरु एक रात बीरगंजमा नै बसेका थिए । उनीहरुलाई रामदेवसँग भेट गराउने ब्यवस्था धरानका एक ब्यक्तिले मिलाएको सूत्रले बतायो ।
जाने वेलामा विभागीय प्रमुखहरुसँग प्रतिशोध
पदबाट जाने बेलामा भीसीले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी विभागीय प्रमुखहरुको हेरफेर गरेका छन् । उनले बरिष्ठलाई अपमानपूर्वक हटाएर आफ्ना भ्रष्टाचारमा साथ दिएका जुनियर डाक्टरहरुलाई विभागीय प्रमुख बनाएर गएका छन् । यसले प्रतिष्ठानमा अराजकता छाएको छ । त्यसो त २०७२ सालतिर बसेको सिनेटको वैठकले विभागीय प्रमुखहरुलाई आवश्यक परेको बेला फेरवदल गर्नसक्ने अख्तियारी उपकुलपतिलाई दिएको थियो । यद्यपि उनले ती विभागीय प्रमुखहरुलाई हटाउन सकेका थिएनन् । तर आफू पदबाट जानु भन्दा एक हप्ता अघि हटाएर बदला लिएको उनले स्थानीय पत्रपत्रिकाहरुलाई हाकाहाकी बताएका छन । ती विभागीय प्रमुखहरुमा रेडियोलोजीका प्राडा आरके रौनियार, मेडिसिन विभागका प्राडा प्रल्हाद कार्की, फोरेन्सिक विभागका प्राडा बीएन यादव, प्रसूति तथा स्त्री रोगका प्राडा शैलेजा क्षेत्री, बालरोग विभागका प्राडा गौरी शंकर शाह, सर्जरी विभागका प्राडा चन्द्रशेखर अग्रवाल रहेका छन् । ती विभागीय प्रमुखहरुले आफूलाई असहयोग गरेकाले हटाएको दासले बताएका छन् । डा. दासले ठुलठुला मेशिन र उपकरणहरु किन्दा धेरै कमिसन लिएर कमसल सामानहरु किन्नेर प्रतिष्ठानलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सान पु¥याउदै आएकोले आफूहरुले तत्कालको लागि त्यस्ता सामान खरिद गर्न स्वीकृति नदिएको कुरा रेडियोलोजी विभागका प्रमुख रौनियार बताउँछन् । कमिशन खान पल्केकै कारण उनले जाने बेलामा पनि कर्मचारी नियुक्तिदेखि लिएर ठूला साना ठेक्काका टेण्डर आह्वान गर्ने र मेशिन खरीद गर्ने काम गरेका छन् । झण्डै २५ करोड पर्ने एमआरआई मेशिन खरीद गर्न उनले रौनियारमाथि ठूलो दबाब दिएका थिए तर रौनियार सहमत नभएपछि उनको योजना तुहिएको थियो । यसैगरी मेडिसिन विभागको ल्याथल्याव मेसिन खरिद गर्न डा प्रल्हाद कार्की सहमत नभएपछि उनको सहायक रहेका डा संजीव शर्माको सहयोगबाट सो मेसिन खरीद गर्न उनी सफल भएका थिए । बजारमा ४ करोडमा पाइने सो मेशिनलाई उनले ६ करोडमा किनेर कमिसन वापत राम्रो आम्दानी गरेका छन । उनलाई यस काममा सहयोग पु¥याउने डा.संजीव शर्मालाई भने विभागीय प्रमुख बनाएर पुरस्कृत पनि गरेका छन् । साम दाम दण्ड भेदको नीति अख्तियार गरेर पैसा कमाउने धन्धामा लागेका डा दासको पछिल्लो क्रियाकलापले प्रतिष्ठानलाई धरासायी बनाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
भीसीको दौडमा को को छन् ?
वर्तमान उपकुलपति डा. दासको पदावधि यही डिसेम्वरदेखि समाप्त भएकोे छ । उनी पदबाट बिदा भएपछि आगामी उपकुलपति को हुने भन्ने चासो बढेर गएको छ । त्यसो त फेरि पनि उपकुलपतिको पद हत्याउन वर्तमान भीसी दास पनि कम्मर कसेर लागेका छन् । पहिला पनि भीसी बन्न झण्डै ३ करोड नजराना खुवाउन सफल दासले यस पनि ६ करोडसम्म खुवाउन झोला बोकेर हिंड्ने गरेको उनका निकटवर्ती कर्मचारीहरु बताउँछन् । तर उनका बारेमा अख्तियारमा समेत कारबाहीको बण्डल फुस्किन लागेकाले वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले उनको नाम सिफारिस नगर्ने भन्दै आएकाक छन् । यद्यपि नेपालमा पैसाले जे पनि गर्न सकिने अवस्था भएकाले उनले फेरि पनि अवसर नपाउलान् भन्न चाहि सकिने अवस्था छैन ।
पुस १३ गतेदेखि भीसीको पद खाली भएपछि उनको स्थानमा नयाँ भिसीको सिफारिसको गर्नुपर्नेछ । प्रतिष्ठानको सहकुलपतिको हैसियतले स्वास्थ्य मन्त्रीले ३ जनाको नाम कुलपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्दछ । मन्त्री थापाको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती र योजना आयोगका सदस्य गीताभक्ता जोशी सदस्य रहेको उपकुलपति सिफारिस समिति गठनका लागि मन्त्रालयले फाइल प्रधानमन्त्रीकोमा पठाएको एक महिना बढी भइसकेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले डा दासकै दबाबमा सिफारिस समिति नै गठन नगरेको आरोप छ । उपकुलपति रिक्त नहँुदै सिफारिस गरिसकेको नाम प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म पनि थन्क्याएर राखेका छन् ।
माओवादी र कांग्रेसबीच भागबण्डा नमिलेकाले सिफारिस समिति बन्न नसकेको बताइन्छ । यदि वीपी प्रतिष्ठान कांग्रेसको भागमा परेमा प्रतिष्ठानभित्रैका बरिष्ठ डाक्टरहरु आरके रौनियार, सिएस अग्रवाल र प्रल्हाद कार्कीको नाम सिफारिस हुने पक्का छ । यदि माओवादीको पोल्टामा भीसी परेको खण्डमा हाडजोर्नी विभागका डाक्टर गुरु खनाल र डा रौनियारको नाम सिफारिस हुने बताइन्छ । दुवै पार्टीको सूचीमा परेका प्राडा रौनियार यसअघि पनि भीसीका दावेदार थिए । तर उनले तत्कालीन मन्त्री राजेन्द्र महतोलाई थैली चढाउन नसक्दा वलभद्र दासले बाजी मारेका थिए । प्रतिष्ठानका सिनियर र हाक्काहाक्की बोल्न सक्ने व्यक्तिको रुपमा परिचित डा. रौनियार आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा पनि विश्वभरी परिचित छन् । उनले रेडियोलोजीमा राम्रो अनुसन्धान गरेबापत बर्षेनी अन्तर्राष्टिय सम्मान र पुरस्कारहरु पाइरहेका छन् । अमेरिका, जापान, भारत, डेनमार्क लगायत विभिन्न देशका वैज्ञानिक संस्थाहरुसमेत गरी उनले १६ वटा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको रेडियोलोजी सगठनको उनी अध्यक्ष पनि भइसकेका छन् । उनकै पहलमा २ बर्षअघि वीपी प्रतिष्ठानमा दक्षिण एशिया रेडियोलोजी संगठनको अन्तर्राष्टिय सम्मेलन गरी आफ्नो अध्यक्ष पद पाकिस्तानका वैज्ञानिकलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रतिष्ठान रहेको जिल्ला सुनसरी उनको गृहजिल्ला पनि हो । उनी दुहवीका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनलाई भीसी वनाउन उनका दाजु नेपाली कांग्रेस सुनसरीका पुराना नेता गौरीशंकर रौनियार यतिबेला सवै नेताहरुसँग अनुरोध गरिरहेका छन् ।
भीसीे बन्ने दौडमा प्रतिष्ठानका पुराना बरिष्ठ शल्यक्रिया चिकित्सकको रुपमा परिचित डा चन्द्रशेखर अग्रवाल पनि अग्रपंक्तिमा देखिएका छन । आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा राम्रो नाम कमाएका अग्रवालले पनि विशेष गरी भारतीय चिकित्सकहरुमाझ राम्रो परिचय वनाएका छन् । तर प्रशासनिक क्षेत्रमा खासै अनुभव नभएका सोझा अग्रवाललाई भीसी बनाउन पाए आफनो पनि रोजीरोटी राम्ररी चल्ने मनसायले प्रतिष्ठानभित्रकै केही कांग्रेसी कर्मचारी र ठेकेदार चेतन अग्रवाल, सीपी दत्तहरु मरिमेटेर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन् । यसबाहेक शेरबहादुर देउवाको आर्थिक सहयोगीको रुपमा आपूmलाई परिचित गराउने धरानका धनाढ्य रोशन सोनी पनि उनको पक्षमा लागिपरेको कुरा स्वयम् अग्रवालले धरानको एक स्थानीय पत्रिका धरान साप्ताहिकलाई बताएका छन । तर ६ बर्षअघि उपचार गर्न आएकी एक महिलामाथि हातपात गर्न खोजेको घटनाले उनीमाथि लागेको नैतिक आक्षेपको कुरा भने बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।
भीसीका अर्का उम्मेदवार मेडिसिन विभागका वरिष्ठ डाक्टर प्रल्हाद कार्की पनि हुन् । उनलाई प्रतिष्ठानका सवैभन्दा सिनियर डाक्टरको रुपमा पनि लिइन्छ । प्रतिष्ठानको स्थापनाकालदेखि नै कार्यरत डाक्टरमध्ये उनी पनि एक हुन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा पनि परिचित डा कार्कीलाई भीसीको लाग्ाि सहयोग गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा. शेखर कोइराला हुन् । त्यसबाहेक भीसी वन्ने दौडमा आफूलाई पनि योग्य सम्झनेहरुमा डा विएन यादव, डा.संगीता भण्डारी, डा गुरु वराल रहेका छन् । डा संगीता भण्डारी यस अघि पनि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति भइसकेकी हुन् । हाल उनी वीपी प्रतिष्ठानमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत छिन् ।
वीपी प्रतिष्ठानभित्र भीसी बन्न योग्य थुप्रै डाक्टरहरु भए पनि आपसी खिचातानी र वैमनस्यताका कारण सधैं स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नाम सिफारिस गर्न अप्ठायारो पर्ने गरेको छ । जसका कारण पार्टीले प्रतिष्ठानबाहिरका डाक्टरहरुलाई खोजेर पठाउने गरेको उदाहरण पनि छ । जस्तो सुन्दरमणि दीक्षित, सीपी कर्माचार्य, लोकविक्रम थापा जस्ता पार्टीले नियुक्ति गरेर पठाएका भीसीहरु पनि यहाँ आएका छन् । तर उनीहरुलाई पठाउने पार्टी सताच्युत भएपछि उनीहरुको पनि मनोबल घट्ने, प्रतिष्ठानको समस्या बुझ्न समय लाग्ने भएकाले बाहिरबाट ल्याइएका भीसीहरु राम्रै व्यक्ति भए पनि काम गर्न असफल हुने गरेको अनुभवले देखाएको छ । यस हिसावले यसपटक सम्बन्धित पार्टीहरुले विनाआग्रह पूर्वाग्रह हाल भएका सिनियर डाक्टरहरुमध्येकै एकलाई भीसी, अर्कोलाई शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशक वनाइदिए सवैको समस्या हल हुने सुझाव प्रतिष्ठानका सिनियर डाक्टर प्राध्यापक कर्मचारी विधार्थीहरुले दिने गरेका छन् । पूर्व उपकुलपति र पदाधिकारीहरुलाई पनि सम्मानित स्थानमा जिम्मेवारी दिएमा वीपी प्रतिष्ठानभित्र चल्ने गरेको खिचातानी, गुठवन्दी, इष्र्या द्वेषहरु एक हदसम्म मेटिएर जाने र प्रतिष्ठानले गति लिने स्थानीय बुद्धिजीवीहरु वताउँछन् ।